Kusetshenziswa iziqukathi, yini nokuthi kungani
[Iziqukathi] igama elinikezwe ezindaweni ezikhawulelwe, elenziwa lakwazi ukuqoqwa kwezinhlelo ezingaphansi kwe-linux njenge [cgroups ] futhi [namespaces ]. Yize ikhasi le-wiki lisebenzisa igama ukwenza kahle Ngicabanga igama ukuzihlukanisa kufaneleke ngokwengeziwe, ngoba i-virtualization isho ukuthi kukhona ungqimba wokuhumusha phakathi, ngenkathi okwenziwa ngamaqoqo kanye nezikhala zamagama ukwehlukanisa, nokwenza izinqubo zibe ngokweziqu.
Amaqembu asetshenziselwa ukuchaza izinqubomgomo zokwabiwa kwezinsizakusebenza, imvamisaRAM futhiCPU , ngenkathi izikhala zamagama zilawula okuqukethwe njengama-mount-points, networking and users. [I-Apparmor] esikhundleni sayo inikeza indlela yokubeka umkhawulo wamakhono wezindawo zeziqukathi zizonke, kanti i-apparmor ngaphandle kweziqukathi, njengoba kubhaliwe ku-wikipedia, kusekelwe ohlelweni.
Amathuluzi afana isicaba futhi umlilosebenzisa iziqukathi, ukuthola indawo yokungena yezinhlelo zokusebenza zomsebenzisi. Iziqukathi ze- [Windows] zisebenzisa amasistimu alinganayo, futhi zinikeza ukusekelwa kweziqukathi ze-linux nge- [WSL].
Kwesinye isikhathi ukuphepha, noma kunjalo kuleso simo, ukubona ngokuphelele okugcwele kunikeza iziqinisekiso ezingcono.
Ukufeza ukuzala kabusha kokusebenza, nokuphatheka, okufana nokuthi izinhlelo zokusebenza ezincike ekulungiselelweni kwemvelo ethile zingasebenza ngaphandle kokukhathaza umsebenzisi ngezinyathelo ezengeziwe zokusetha.
Ukuhlela, isoftware ye-orchestration efana ne-kubernetes isebenzisa [izikhathi zesikhathi sokuqukatha] ukuhambisa amasevisi kubasingathi ngaphandle komthungo kanye nomqondo wokukhipha ongabonakali.
Lapho ngiqala ukwakha uphayini , Ngizame kancane ukuthumela izithombe zami zesitsha, ezisatshalaliswa kusuka ekukhishweni kwe-github. Umbhalo oyinhloko (trees ) imiyalo yayikhona
Yayifana ne-flatpak, njengoba ngangithumela i-ostree static delta ngokususelwa kusithombe esikhulu sikaphayini, futhi [ngibheka] izimpande ezisuselwa kuhlelo lokusebenza olusha, bese ngivula isibonelo sesitsha ngaphezulu kwaso. I-OpenVZ ibinezinkinga eziningi ngaphambi kwe-v7 yokusebenzisa isitsha (ngoba uyazi ... ubusebenzisa i-a isidleke isiqukathi esisekelweni esisekelwe esitsheni [iVPS], futhi i-kernel yayiyimfoloko ye-v2.6 (!)) ... bekuyi- okukhulu uikuchitha iskhathi.
Umzamo wami bekuwukuthola isikhathi esincane sokusebenza ngaphandle kokudingadocker noma isoftware engaphezulu ye-beefier, njengoba i-docker kungenzeka ilula kakhulu, futhi isibumbu sedokodo , ukwakhelwa ngaphakathi kwabelana ngokusebenza okuningi futhi kukunikeza izici eziwusizo kakhulu ku-orchestration, okwenza kube kuncike kakhulu kuzidingo zohlelo lokusingathwa uma kuqhathaniswa Ama-k8s noma nomad.
Ngaphandle kokuthi iziqukathi ziyisici ongasifuna kaningi, i-orchestration ayisiyo. Ngiyacabanga okuqondiswe ngokukhululekile imikhankaso yokukhangisa iheha i- engahlosiwe khomba izithameli zaleyo software, okwenza umuntu akholelwe ukuthi ingasiza kubo , ngaphandle kokugcizelela umbono wokuthi wena ngempela ngidinga ukukala okuningi (!) ukufakazela izindleko eziyinkimbinkimbi zokusetha okunjalo. Inombolo ye- lula tooling eyakhelwe ezungeze ama-k8 ukusiza inqubo yokuqalisa iqoqo lama-k8 kufanele kube ubufakazi obenele ...
Amathuluzi we-Orchestrations agcina eminyanise indawo yezixazululo zokuphatha imishini yokusingathwa eminingi lapho abasebenzisi bengenakukwazi ukubona umehluko phakathi kweziphakeli zezilwane nezinkomo. Ezikhathini eziningi, isoftware efana ne-ansible, pyinfra noma ngisho cssh noma umlotha konke umuntu akudingayo.
Thumela Amathegi: imibono, mayelana
Ephreli 19, 2021
© untoreh - Inikwe amandla yi UFranklin